Ny hatsaran'ny fahatsorana sy ny fifehezana, tsindrio ny bokotra fiatoana ho an'ny fotoana｜OPS Design - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Ny hatsaran'ny fahatsorana sy ny famerana, kitiho ny bokotra fiatoana kely ho an'ny famolavolana OPS OPS
Ny hatsaran'ny fahatsorana sy ny famerana, kitiho ny bokotra fiatoana kely ho an'ny famolavolana OPS OPS
2021 / 06 / 13 FisokajianaInterior design 5905 0
Miato ny fotoana sy ny habaka amin'ny famolavolana
Mamorona fotoana milamina sy voafehy nofaritan'ny hazavana sy aloka
Any afovoan'ilay tanàna be olona ao Guangzhou ity tetikasa ity. Ny olona dia miaina ao anaty pavily mangatsiaka toa mety amin'ny vy sy ny beton, saingy ao anatiny dia mieritreritra foana ny fomba hanatonana ny natiora sy ny fiainana izy ireo. Ny mpandray anjara lehibe dia tia ny fiainana ary mijery ny hakanton'ny fiainana, mikendry ny hanao trano ho seranana mahafinaritra sy mafana. Tanjony ny hahatonga ny tranony ho seranana mahafinaritra sy milamina, ary hahita fitadiavana fampiononana sy fitoniana efa very nandritra ny fiainana sy ny asa be atao.
Ny fitarihana trano
Ny refy amin'ny habakabaka dia tsotra sy malalaka, ary afaka mitondra fotoana be dia be. Ny tompon'ity tranga ity dia manao kaopy kafe amin'ny fotoanany ary miresaka amin'ny namany. Manasà namana enina na fito hanatrika fety. Amin'ny faran'ny herinandro sy fialantsasatra dia miara-mivory ny fianakaviana ary mihomehy. Ny fahatsiarovana ny fotoana malefaka dia voasokitra tsy voafetra amin'ity habaka ity.
Ny rindrina vita amin'ny marbra vita amin'ny rindrina eny amin'ny habakabaka, miaraka amin'ny sofa apricot rustika, kabinetra TV tsotra dia maivana sy tsotra. Manala ny haingo ivelany tsy ilaina, manala ny loto ary mitazona ny tena izy. Izy io dia maneho fahatsarana hatsarana miavaka indrindra ary miverina amin'ny votoatin'ny fiainana.
Ny fanahin'ny famolavolana dia ny fampiasana ny fandikana kely indrindra mba hahatonga ny ampahany sisa ho voajanahary.
Room Efitra fandraisam-bahiny | Miverina amin'ny fototra
Ny aingam-panahy avy any ambanivohitra dia ampidirina ao amin'ny antsipiriany momba ny fanaka amin'ny efitra fisakafoana. Wood dia afaka mamorona toerana manasa somary manasa amin'ny fanjakana misoko mangina, miaraka amin'ny loko marefo sy ny endriny tena izy, mamorona tontolo fisakafoanana ahazoana aina sy kanto.
Manomboka amin'ny vatan-kazo mafana ka hatramin'ny sampana maitso vaovao, ny habaka dia tototry ny hafanana voajanahary amin'ny halehibeny, manamboatra ny fotoana ary manampy amin'ny endrika mangatsiaka ao amin'ny efitrano fisakafoana.
"Amin'ny fambolena hatsarana eo amin'ny fiainana, dia azo atao ny mandanjalanja ny hatsarana ara-tsosialy amin'ny ankapobeny." Afaka manomboka amin'ny famakiana zavakanto voninkazo isika, amin'ny famakiana ny hatsarana ary amin'ny famakiana ny fiainana.
Room Efitra fisakafoanana | Famindrana sary
Ny fampiasana zavakanto voninkazo voajanahary dia mahatonga ny toerana ho milamina kokoa. Izany rehetra izany dia manome endrika ara-panahy sy mafana indrindra amin'ny fiainana. Ny famoronana dia zavakanto, ary koa ny sakafo sy ny fiainana.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia mampiasa fitaovana ambanivohitra voaangona, nanapaka, nanangona ary nanangana indray mba hanovana ny làlana ho asa ara-panahy. Ny tena azontsika atao dia ny mindrana sy manafatra, manadino ny fisiantsika manokana, mba hahafahan'ny asa miatrika ny mpijery sy mitantara tsy miankina aminy.
Ny habaka iainana dia ekolojika, voajanahary ary maimaim-poana. Ny fanomanana ny ratana sy ny hazo dia esorina amin'ny hatsaran-tarehy amin'ny endrika ara-panahy ary ny fahaiza-mandanjalanja dia novana ho kabary ara-nofo. Tsotra sy mafana, mafana sy malefaka ny rivotra, mamela ny olona hahita ny fahanginan'ny poezia amin'ny fiainana.
Bedroom efitrano fatoriana Master | Ny fampiasana rattan sy fanenomana hazo any afovoan-tany
Ny tena mampiavaka ny tetikasa dia ny famolavolana tena tsotra sy kanto. Ny fikorianan'ny lamba sy ny dian-tànana dia marefo sy feno granularity. Ny hatsaran'ny fiainana dia hita taratra amin'ny drafitra habakabaka kely rehetra noforonin'ny mpamorona.
Ny firafitra voajanahary sy ny estetika wabi-sabi ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny faharoa dia voangona ao anaty akora voajanahary miloko hazo sy tontonana hazo rindrina. Ny fampiasana greenery tsy voafehy sy ny haingon-trano tsy azo sakanana dia hita taratra eny amin'ny habakabaka, manasongadina ny harena sy ny fahatsorana mangina eo amin'ny habaka.
Raha ampitahaina amin'ny famaritana an'izao tontolo izao ny soatoavina sy ny hatsaran-tarehy, dia mitandrina bebe kokoa amin'ny kalitao voajanaharin'ireo zavatra ireo ihany. Ny mpamorona dia nanandrana namorona endrika, endrika ary endrika endrik'ilay fitaovana.
Bedroom Efitra faharoa ｜ Fitaomam-panahy ho an'ny zava-misy
Ao amin'ny efitran'ilay zazalahy dia misy ambara tanteraka ny fahalianana.
Nofinofy eny amin'ny habakabaka izay nipoitra hatramin'ny fahazazany, ary ny lohahevitra manaitaitra dia mamerina ny fandriana sy ny firavaka zavakanto. Izany dia mahatonga ny habakabaka iray manontolo hangatsiaka nefa tsy miala amin'ny fahafinaretana sy manga lehibe mifono mistery. Mampiseho ny fiainan'ny tanora sy manaitaitra ny tanora, izay manjary manjelanjelatra manomboka izao.
Room efitran'ankizy ｜ nofy sy habakabaka
Ny tena mampiavaka ny efitrano dia ny efitranon'ny zazalahy.
Ny mpilalao fototra dia mandositra ny hakanton'ny tanimanga isan'andro raha mitahiry toerana manokana ho an'ny saka. Amin'ny fotoana fialam-boly asa. Afaka manasitrana ny saina reraka. Raha dinihina ny fizotry ny hetsiky ny saka dia misy elanelana kely eo anelanelan'ny sosona ary atsangana ny "lavaka saka" manokana. Io dia ahafahan'ny saka manana toerana malalaka kokoa mihetsika.
Ny fitambaran'ny fihetsiky ny saka sy ny olona dia manome fahatsapana asa sy fialamboly vaovao.
Room Efitra fiasana ｜ Fahafinaretana izaitsizy
Ny fahatsorana sy ny fahadiovana dia mety hiteraka rivo-piainana milamina sy milamina. Afaka mamela antsika hanandrana hatrany ny fihetseham-po madio sy mafana indrindra amin'ny fiainana an-tanàna izy io, somary misavoritaka, ary mitondra antsika fahatsapana hafa mahazo aina sy milamina.
Voninkazo mangina sy tontolo iainana kanto
Ny gadona mifintina sy haingana amin'ny fotoana dia mahatonga ny olona mihazakazaka ho amin'ny fiainana ho lasa tsy milamina. Tsy misy toerana tsara kokoa hanafahana ny fanahy noho ny trano, izay ahafahantsika mijanona ny diantsika, miadana ary mahatsapa ny tantaram-pitiavana sy mafana ny mpilalao fototra.
Amin'ny marainan'ny faran'ny herinandro mamiratra, manomana sakafo mamy isan-karazany ao an-dakozia ny tompon-trano. Androany faha-3 taonan'ny olom-pantatr'ilay lehilahy sy ny vehivavy. Ny tara-masoandro dia taratra moramora eo amin'ny latabatra fisakafoana, izay rakotra voninkazo, tsindrin-tsakafo, voankazo ary karazan-tsakafo rehetra. Nivoaka tsimoramora ny mozika avy amin'ilay mpilalao firaketana vinyl, izay nilaza fa andro manokana io.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia feno alàlan'ny tantara mahafinaritra, ary ny loko lehibe dia ny fitambaran'ny volondavenona sy maitso maitso miaraka amin'ny beige tsotra. Ny fitenenana loko dia milamina kokoa, voajanahary ary mahazo aina, toy ny fikororohana voninkazo. Izany dia manome endrika velona sy kanto ny efitrano fandraisam-bahiny. Na dia tsy misy fo mitempo aza, fa misy zoro foana hamenoana ny andrasan'ny fo.
Ny loko mainty, fotsy ary volondavenona ary ny zavakanto voninkazo tsara tarehy dia matevina miaraka amina tantaram-pitiavana, tototry ny fahatsapana poetika ihany koa, ary ho fahatsiarovana malefaka sy tsy manam-paharoa mandrakizay ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny - ivelan'ny fotoana, ao anatiny.
Ny efitrano fisakafoanana dia tsy mahazatra, amin'ny alàlan'ny fanitarana sary hosodoko amin'ny rindrina manasongadina hanasongadinana ireo sosona habaka. Milanjalanja sy milamina araka ny tokony ho izy, miaraka amina sosona alàlan'ny aloka. Ireo sambo voninkazo glazed napetraka eo ambony latabatra miaraka amina voninkazo voninkazo kanto dia mandravaka ny sary, manampy loko sy dikany.
Ireo sampana maintso mihetsiketsika, seza fisakafoana beige, ary ireo sary hosodoko feno haingo eo amin'ny rindrina dia mifampitaratra, manome ny habaka hery ara-nofo sy ara-pitiavana. Ny tara-pahazavana mamiratra amin'ny maraina dia mandalo eo am-baravarankely ary mameno ny habaka. Ny tompony dia afaka manandrana ny fotoana feno fifaliana sy milamina eto.
Ny efitrano fatoriana dia voaravaka volondavenona ambony loko lehibe, voaravaka lamosina malefaka miloko cinnabar, mamorona toerana fialan-tsasatra tena tsara sy kanto ary mahafa-po. Eto ianao dia afaka mijery lalina ny fanahin'ny hatsaran-tarehy, izay mifandona sy mifangaro ny lamaody sy ny kilasika.
Ilay chandelier boribory nahantona hatrany ambony ka hatrany ambany, ny zavakanto voninkazo misosa eo am-pandriana, ary ny fandriana fanamarinana vorona mahazatra dia taratry ny fomba maverika kanto sy ny tsiro amin'ny fiainana maoderina sy maoderina an'ny tompony.
Ny lokon'ny ambaratonga faharoa miaraka amin'ny volondavenona sy volontany an-tany dia mamorona atmosfera malefaka sy kanto. Taorian'ny nanariany ireo kojakoja habakabaka be loatra, ny labozia kanto roa sy ny sary hoso-doko dia afaka handravaka ny haben'ny efitrano fatoriana mangina, izay manasongadina hatrany ny fahatsapana habaka lehibe.
Ny sarin'ireo tovovavy tanora dia miseho eny ivelany. Jereo fotsiny ny rindrina haingon-trano voninkazo velona nefa milamina mamelatra ny fahatsapana ny taonan'ny tovovavy mandinika nefa mahafinaritra.
Ny mpamorona dia mifikitra amin'ny fitsipiky ny fahatsorana, ny hakantony ary ny maha-azo ampiharina, mamorona sehatry ny asa manokana miaraka amin'ny antsipiriany. Eto dia afaka mankafy ny mahafinaritra ny zavakanto voninkazo ny tompovavy, ary mamita ny traikefa mitombo mifandraika amin'ny voninkazo sy fahatsiarovana mahafinaritra amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny asa sy ny fialamboly. Ny sampana sy ravina mazava sy miala sasatra dia miresaka amin'ny tontolo iainana, ary ankoatr'izay dia milaza ny tantaran'ny trano sy ny fotoana miaraka amin'ny zavakanto, endrika ary zavamaniry.
Rehefa mirindra tsara ny zavatra rehetra eny amin'ny habakabaka dia hiteraka hatsarana. Eto amin'ity toerana ity dia mety daholo ny zava-drehetra rehefa miala ao anaty korontana ianao. Azonao atao ny mankafy am-pilaminana ny dia sensory izay mahafa-po ny faniriana anaty sy ny fahafinaretana amin'ny fahitana.
Anaran'ny tetikasa: Zhujiang Four Seasons Flower City Showroom
Tompony: Indostria Zhujiang
Famolavolana fanaka malefaka: Guangzhou OPS Decoration Design Co.
Ekipa mpamorona: Ye Huajin, Lin Suting, Li Lin, Ye Yuqiang, Xiang Wenyan
Toerana famolavolana: Guangzhou, Guangdong
Fampandehanana sary: ​​Ouyang Junyin-Wotu painting (Foshan)
Previous :: Trano kambana haingo skandinavianina, endrika ankizy ho an'ny efitrano toy izany, tsara loatra! Next: Fomba amerikana maivana amerikana, manangana fombafomba amin'ny fiainana | Hongfu Gauge Design & Yishe malefaka haingo